Moa ve tantanan-kisoa ity Hotely Wyndham O'Hare ity?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Moa ve tantanan-kisoa ity Hotely Wyndham O'Hare ity?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Editorial • Hotels & Resorts • Zon'olombelona • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
by Dr. Anton Anderssen - manokana ho an'ny eTN
Namaky 18 aho
Mpanoratra Dr. Anton Anderssen - manokana ho an'ny eTN
ASTA (American Society of Travel Advisors) no fikambanana matihanina amin'ny dia lavitra lehibe indrindra. Corey Bailey, mpandrindra ny mpikambana ao amin'ny ASTA, dia nilaza tamiko fa misy mpikambana 10,000. Androany maraina, ASTA dia nandefa mpanolo-tsaina mpandehandeha momba ny dia (fantatra amin'ny anarana taloha ho toy ny mpitsangatsangana) anay rehetra, nangataka ny hanome laharam-pahamehana ireo gadra hotely lehibe. Taorian'ny 30 taona naha mpanolotsaina fitsangatsanganana ahy dia nalahatro mora foana tamin'ny Marriott avo indrindra ary Wyndham ambany indrindra ho an'ny sokajy kalitao 9 rehetra. Tsy nizara ny valinteniko aho fa nanontany ny laharam-pahamehako i Marco namako. Napetrany teo ambany vatolampy ihany koa i Wyndham.
Mandany ny voloko any Hawaii aho ho an'ny fitsaboana. Ny toetr'andro ririnina lasa teo tany Michigan dia nilatsaka hatramin'ny 40 degre ambanin'ny zero (miaraka amin'ny rivotra mangatsiatsiaka) ka hialako ny toetrandro mampidi-doza miorina amin'ny baikon'ny dokotera. Voan'ny tsiranoka hozatra aho ary mampiasa seza misy kodiarana.
Mampalahelo fa lava sy sarotra ny sidina avy any Michigan mankany Honolulu. Matetika dia misy fijanonana mandritra ny alina. Tamin'ity taona ity, ny fijanonako alina fotsiny dia tao amin'ny seranam-piaramanidina O'Hare any Chicago. Manana teboka fahatokisana Wyndham izay efa lany daty izahay, koa dia natakalonay ireo isa ireo ho an'ny fananana Wyndham izay manome fitsangantsanganana mankany sy avy amin'ny seranam-piaramanidina ho fidiram-bola ho an'ny mpanjifany. Nasaina nanjavona ireo teboka 9 jolay raha tsy navotantsika izy ireo, ka io hariva io dia namandrika ny trano fandraisam-bahiny voalohany hitako nanolotra ireo serivisy ilainay.
Nahita Days Inn by Wyndham O'Hare West tao amin'ny Elk Grove Village aho tamin'ny 1920 E Higgins Rd., Elk Grove Village, IL 60007. Natakaloko ny isa azonay mba hividianana iray alina tamin'ity tany Wyndham ity; ny vola nividy dia tsy azo averina. Raha nisy antony te hanova na hanafoana ity famandrihana ity dia nafoinay ny fitehirizanay. Ny famandrihako dia tsy azo averina tamin'ny laoniny noho ny taonantsika.
"Tsy azo averina" dia nampahatsiahy ahy ny tranga sasany izay sendra ahy taloha izay nandavan'ny hotely ny fanafoanana satria mora manala ny mpanjifa raha vao mahita fa fananana kisoa. Nijery an-tserasera aho raha hijery momba ity fananana Wyndham ity, ary nanody ny vavoniko io.
Amin'ny TripAdvisor, vahiny 160 no nanasokajiana ity hotely Wyndham ity ho "mahatsiravina." Ny fitantanana dia manana maodely hamaly ny naotin'ny isam-batan'olona amin'ny alàlan'ny fialantsiny amin'ny alinalina am-bifotsy: "Toa nilatsaka ny baolina tamin'ny fanatanterahana ny antenainao." Heveriko fa tsy nilatsaka ny baolina ry zareo - ny hevitra natao dia nanipy ny baolina teo am-baravarankely, tao anaty afo fanariam-pako - izany no lazan'izy ireo ary nanipy lasantsy ho an'ireo antontam-pitarainana ho sorona ho an'ireo andriamanitra kamo. Ity no nolazain'ny mpikamban'ny TripAdvisor farany momba ity hotely ity:
Mitatitra i AmyG: “Naharikoriko tanteraka ny hotely sy ny efitrano. Sony ilay karipetra, maimbo ny efitrano, ary tafaporitsaka eraky ny gorodon'ny fandroana ny trano fidiovana. Avy hatrany ny pug dia nahita pilina tsy fantatra tany amin'ny zoron'ny efitranon'ny hotely, izay nanosika anay hanakorontana ny efitrano iray manontolo mba hisian'ny loza hafa koa. Ny kidoro sy ny lambam-pandriana dia samy nisy fanapahana avokoa, toy ny antsy, sy ny doro sigara. Ilay peratra dia nisy peratra volontsôkôlà manodidina azy. Ny milina ranomandry ao amin'ny lobby dia tena cooler fotsiny. Ny sakafo maraina maimaim-poana dia niseho tsy dia vaovao, ary amin'ny tena marina amin'ny tsy fahampian'ny fahadiovana ao amin'ny hotely, tsy natoky izahay fa voakarakara tsara ny sakafo. Avy hatrany dia nanangona ny ampitso maraina izahay mivady ary tsy niandry ny fandefasana fiaramanidina maimaimpoana niverina tany amin'ny seranam-piaramanidina; Naharikoriko anay ny efitranonay ary tsy afaka nivoaka avy teo izahay. ”
Mitantara i Storyteller233859: "Mpivaro-tena eo am-baravaran'ny hotely rehefa niditra ianao." Tsy dia fantatro loatra ny momba ny mpamitaka, saingy fantatro raha mihantona eo am-baravaran'ny hotely izy ireo, tsy tongatonga ho azy izany.
Hoy i Anne T: “Tsy azo antoka ny toerana fitobiana ary tsy misy jiro. Ao ambadiky ny toeram-ponenana lava be io. ”
Nitatitra i Trail50239233586: “Maharikoriko ny toerana. Mpivaro-tena ao Harbour. ”
EvangelistAngela dia nanoratra hoe: “Ny mpanao asa tanana sy ny rongony manao raharaha miharihary; Fantatry ny fitantanana hotely fa mihetsika toa tsy fantatr'izy ireo. Ny vehivavy dia mahery setra hanatona ny sakaizanao na ny vadinao. Ireo olona ireo dia tsy nesorina tao amin'ny hotely ary tsy ho eny am-pitarainana akory… Raha tsy mampaninona anao ny misokatra sy mihidy ny alina tontolo, olona mivarotra ny vatany sy mivarotra rongony amin'ny toerana akaiky ny zanakao na ny fianakavianao, avy eo mitoera eto. Raha tsy raharahanao ny vehivavy mahery setra sy sahy manatona ny vadinao hanao firaisana dia mijanona eto. Raha tsy mampaninona anao ny fianakavianao fa tandindomin-doza amin'ity hetsika ity dia mijanona eto. Tsy misy vidiny atahorana hampidi-doza ny ankohonako ary ny fitantanana dia milalao "hadalana" amin'ny raharaha iray manontolo, saingy manana fakantsary ao an-dalantsara izy ireo hahafantaran'izy ireo izay mitranga. "
Tao amin'ny naoty iray dia nilaza i Jeff C tao amin'ny Yelp hoe: “mandrora amin'ny rindrina rehetra.” Nasehony ny sarin'ny projectile ranon-javatra iray izay nidona tamin'ny rindrina avy eo nilatsaka tamin'ny tany. Jeff, tsy mandrora izany, tahio ny fonao tsy manam-paharoa.
Tao amin'ny Tripadvisor, DKeely11 dia nitatitra hoe: "fofona Caustic ao amin'ny tohatra."
Bjf732001 dia nitatitra hoe: "Nila adiny 3 mba hahazoana lamba famaohana iray ho an'ny fianakaviana 4 aorian'ny fisavana."
Ajm22751 dia nitatitra hoe: “Efa antitra ny dingana ary ny karipetra dia misy fantsom-pandrefesana.”
Global07189859058 dia nitatitra hoe: “Mavesatra tanteraka ny karipetra ary nisy bobongolo mainty sy hodi-tongotra tamin'ny tongotro rehefa avy nandeha tongotra tsy nita tongotra namakivaky ny karipetra indray mandeha monja. Notateriko tany amin'ny biraon'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tontolo iainana ao amin'ny Village Elk Grove Village izany, ary notaterin'izy ireo tany amin'ny Office of the County County. Tena goavambe izany! ”
Ry mpamaky malemy fanahy, fantatrao ve fa mampidi-doza ny bobongolo mainty? Ny spore bobongolo mainty dia afaka manidy ny taova, tsy mahavita miasa ny hery fiarovanao ary manimba ny ati-dohanao ary miteraka fahafatesana. Ary miresaka momba ny karipetra soggy, azoko antoka fa tsy vokatry ny rora izany.
Nitatitra i McKenzie L: “Ny lamba famaohana fotsy dia mavo kokoa noho ny zava-drehetra ary tena nilomano; toa nisy pentina ra teo am-pandriana. ”
Ny rà dia mety misy hépatite, ary mety hahafaty anao ny hépatite.
Idris J dia nitatitra hoe: “Ny mpandray olona mpandray vahiny dia sahirana niresaka tamin'ny sakaizany na ny vadiny ary tsy nitandrina anay mihitsy. Tsy mahalala fomba izy fa tsy olona tia mandray olona ary indraindray manome valiny ratsy. Tsy mpifoka isika, ary napetrany tao amin'ny efitrano fifohana sigara. ”
Progue dia nitatitra: “Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia farafahakeliny fiandrasana 30 minitra (matetika 60 minitra.)”
Tony M dia nanoritsoritra mpitantana iray tena ratsy toetra sy mamaly faty: “Tsy tsara fanahy ireo mpiasa. Nosakanan'ny mpitantana tao amin'ny efitranoko aho, satria namelatra takelaka fanary teo ambony latabatra aho, ary nanomboka nitaraina ny mpitantana, satria heveriny fa tsy fanajana izany. Manolotra serivisy fitaterana an-tsambo ny hotely, saingy tsy afaka nampiasa azy io aho ary tsy maintsy nandoa vola 40 dolara ho an'ny taksibrosy hahatongavana tany amin'ny seranam-piaramanidina. ” [nasiam-panitsiana]
Minion7112015 dia nitatitra hoe: “Fanararaotana ataon'ny mpitantana. Tena tsy mahatoky ny mpiasa. Nandrahona ny hiantso ny polisy ny tompon-trano / mpitantana, amin'ny filazàna fa manelingelina ny mpiasa ao aminy izahay, satria nitaraina momba ny mpiasa tsy nanadio ny efitranonay nandritra ny dimy andro nipetrahanay izahay. Nandà ny handray andraikitra izy avy eo, avy eo nangalatra niantso polisy. Nifidy ny hanao tsirambina ny vahininy izy. ” [nasiam-panitsiana]
Raha izaho manokana dia tsy tiako ny mifandray amin'ireo olona tsy mahitsy fo, mpanao valifaty satria manandrana mandainga amin'ny zava-drehetra foana izy ireo, saingy nanjary nahay nandefa resaka aho mba hahafahako mamoaka ireo porofo manimba rehefa misy mianiana tsy manan-tsiny amin'ny fianianana . Tsy misy zavatra mandaitra loatra toy ny heloka amin'ny fianianana amin'ny lainga mba hisintona ny rug eo ambanin'ny fijoroana ho vavan'ny mpandainga.
Filip P dia nilaza fa nampiasa ny toeram-pijanonan'ny trano fandraisam-bahiny izy mba hisidinana sy handehanana AirportParkingReservations.com ary "nesorina" noho ny $ 30 fanampiny mihoatra ny vidiny naseho tamin'ny fanamafisany. Nitaraina izy fa naharitra adiny iray mahery ny fiandrasana an-tsambo ho any amin'ny seranam-piaramanidina, ary mba hisorohana ny tsy fahitany ny sidina dia naniry hitondra azy tany amin'ny seranam-piaramanidina hahazo vola 30 $ fanampiny ny mpandray vahiny, Deepak. Nilaza i Filip fa niantso an'i Uber izy ary nampangaina ho antsasaky ny vidiny. Ity dia mametraka fanontaniana mahaliana momba ny fanodikodinam-bola, fomba fanao tsy etika ary fanalavirana haba. Nanambara i Filip taorian'ny diany fa niantso hotely haka hotely avy amin'ny seranam-piaramanidina izy ary nilazana fa tsy maintsy miandry adiny iray izy; rehefa nitaky ny handefasana ilay seranana i Filip dia nilaza izy fa nilaza taminy ny mpiasan'ny hotely “F ** k.” Rehefa nitaky ny hiresaka tamin'ny mpitantana i Filip dia nilaza izy fa nampita ilay mpiasa hoe: "Tsy ho vonona amin'ny ho avy mialoha ny mpitantana."
Tsy salama saina aho noho ny fivontosan'ny hozatra ary mampiasa seza misy kodiarana elektrika aho. Milanja mihoatra ny 300 pounds ny lanjany ary mitaky fibatana seza misy kodiarana isaky ny entina miaraka aminy aho. Days Inn by Wyndham O'Hare West any Elk Grove Village dia manolotra seranam-piaramanidina; izany angamba no mahasarika ny ankamaroan'ny mpanjifany. Tsy mety ny kalitaon'ny fahalotoana sy ny farango ary ny "gorodona mahavariana" nofaritan'ny mpandinika ny TripAdvisor.
Mazava be ny lalàna Amerikanina manana fahasembanana raha ny resaka seranam-piaramanidina no resahina - raha misy hotely manome serivisy ho an'ny mpanjifa salama, dia tokony hanome serivisy mitovy amin'izany ho an'ireo mpanjifa sembana. Tsy safidy io fa voasoratra amin'ny vato. Ny governemanta federaly aza dia mametraka izany amin'ny sariitatra ho an'ny tompona hotely adala. Ny Departemantan'ny Fitsarana dia mamoaka azy mazava tsara amin'ny https://www.ada.gov/reachingout/lesson71.htm . Raha tsy miraharaha an'io lalàna io ny hotely iray, dia misy vokany.
Tamin'ny 9 Jolay dia niantso an'i Joncienjaindy tao amin'ity trano Wyndham ity aho ary nilaza taminy fa mila serivisy ho an'ny kilemaina aho ho an'ny famandrihana ho avy amin'ny 9 Desambra. Hoy izy hoe “Tsia, tsy hanome izany izahay.” Ka nangataka hiresaka amin'ny mpitantana aho. Nilaza izy fa i Lali no mpitantana.
Niresaka tamin'i Lali aho ary nanao izany fangatahana izany ihany. Lali dia lehilahy ratsy toetra sy mahery setra tamin'ny telefaona, toy ny filazan'ny olona hafa azy ihany. Nanambara izy fa tsy manana seranana fitsangantsanganana misy kilema ary nilaza izy ireo fa tsy mila manome. Nandà tsy hanome ahy ny anarany farany izy, angamba satria fantany fa fandikana ny lalàna ADA ny tsy fahaizako mandray. Nanamafy izy avy eo fa nampiofanina tamin'ny lalàna federaly ary nanoro hevitra ahy izy fa tsy milaza ny lalàna fa tokony handray olona sembana izy. Nilaza tamiko izy raha tsy tiako ny fanapahan-keviny, avy eo enjeho izy.
Niantso ny serivisy ho an'ny mpanjifa Wyndham aho ary nametraka fitoriana momba ny fanavakavahana an'i Days Inn By Wyndham O'Hare. Mahavariana izany https://www.hissingkitty.com/complaints-department/wyndham-hotels mampiseho ny serivisy ho an'ny mpanjifa Wyndham dia isa 1.09 amin'ny kintana 5 miorina amin'ny fitarainana 880 manohitra ny “serivisy”. Josh ao amin'ny fikarakarana mpanjifa Wyndham dia namorona tranga laharana 4256415 ary nilaza fa tsy maintsy miandry 7 andro aho. Tamin'ny volana Jolay izany. Wyndham dia namindra tamim-pahalalana ny fitarainako momba ny fanavakavahana tany amin'i Lali, avy eo nandà tsy hanao zavatra hafa. Tsy nisy ny fanarahan-dia, tsy nisy ny fanentanana, na inona na inona, na dia fanitsakitsahana ny lalàna federaly aza izany. Izany dia nanosika ahy hametraka fiampangana fanavakavahana an'i Wyndham Hotels any New Jersey, izay misy ny foiben'ilay orinasa, ary iray hafa miaraka amin'ny Departemantan'ny Fitsarana.
Namaly faty ahy i Lali tamin'ny fanafoanana ny famandrihanay tsy azo averina raha tsy nahazo alalana taminay. Vao nahalala an'io aho tamin'ny herinandro lasa teo. Noho izany dia nametraka fitoriana momba ny fanavakavahana ny hotely tany amin'ny mpisolovava jeneralin'ny Illinois, ary ny vaomieran'ny zon'olombelona any Illinois aho. Ashley Evans avy amin'ny Biraon'ny Kwame Raoul, ny mpisolovava ao Illinois, dia nilaza tamiko fa mandray am-pahamatorana ny fandikan-dalàna ny mpisolovava ary nanome azy ny laharana raharaha 2019DRC6386. Ny Attorney General dia manadihady ity fananana any Wyndham ity.
Nandinika aho hoe iza ity Lali ity. Facebook dia mampiseho an'i Lali Patel izay mpitantana ny Days Inn O'Hare. Ny fiaviany dia nanambara fa nanatrika ny lisea JD Patel High School tany Borsad, India izy, saingy tsy misy antonta-taratasy hitako mampiseho fa nahazo diplaoma tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa izy, na nanatrika oniversite, na nahazo mari-pahaizana momba ny fizika, na niditra tao amin'ny State Bar of Illinois. Nanome torohevitra ara-dalàna izy fa afaka amin'ny ADA. Ny biraom-panjakana ao Illinois dia tsy nampihomehy.
Ny tranokala Days Inn dia nilaza fa Sunny Patel no mpitantana. Mety hihevitra ny olona iray fa anarana hosoka ity mba hanasarotana ny mpanjifa hitady sy hitory an'i Lali Patel. Lali Patel dia misy zavatra tsy ampoizina maro efa lasa.
Mandritra izany fotoana izany, ny Hotely Wyndham any New Jersey dia mbola tsy niditra an-tsehatra sy nanitsy an'ity lesoka ity. Geoff Ballotti dia mitantana an'i Wyndham, ary salary.com tatitra fa nomena 8,815,739 2018 $ izy tamin'ny taona XNUMX noho ny asa fanompoana nataony. Miandry izahay raha hijery ny fanavakavahana amin'ireo sembana Andriamatoa Ballotti na hanao ny etika izy. Nandritra ny tapa-bolana dia tsy niraharaha ny taratasiko manokana ho azy izy.
Ny fanontaniana momba ny etika Wyndham dia nodinihina taorian'ny nanomezan'ny mpitsara iray an'i Trish Williams 20 tapitrisa dolara ny onitra; notapahina tsy ara-dalàna izy noho ny sioka. Navoakan'i Williams ny fisolokiana goavana nataon'i Wyndham tamin'ny vahoaka marefo. Ny Dolan Law Firm dia nilaza hoe: "Ny mpanjifa antitra dia nofitahin'ireo mpivarotra Wyndham, izay nanokatra sy nanandratra ny carte de crédit nefa tsy nahalala izy ireo ary nandainga momba ny fampihenana ny zanabola, ny saram-pikojakojana ary ny fahafaha-mahazo vola amin'ny fanofana amin'ny fizaram-potoana. … Ny porofo naseho tamin'ny fotoam-pitsarana dia nampiharihary fa ny mpiasan'ny Wyndham dia nirotsaka tamin'ny 'fametrahana hafanana', tetika fivarotana fiakaran'ny tosidrà misy lainga niniana natao sy fampisehoana diso mba hahatonga ny olona hividy teboka Timeshare bebe kokoa. Ireo fomba amam-pivarotana ireo dia nisy andro 'TAFT', izay midika hoe 'Lazao amin'izy rehetra [email voaaro]# * Ing Thing 'andro, izay nanentanana ireo mpiasa hiteny na inona na inona hanao varotra raha tsy apetrany an-tsoratra izany. Ilay masoivohon'ny varotra avo indrindra dia voatonona nilaza hoe: 'Namidiko tamin'ny devoly ny fanahiko. Azoko lazaina izay tadiaviko raha tsy apetrako an-tsoratra izany, izany no mahatonga an'i Wyndham hanana mpisolovava tsara. '”
Jane Danese dia nandefa tao amin'ny tranonkalan'ny Wyndham Corporate: "Miaraka amin'ny fanoloran-tena hanao zavatra tsy mivadika sy fanoloran-tena amin'ny fanaovana ny fivezivezena amin'ny hotely ho an'ny rehetra, dia fantatry ny Wyndham Hotels & Resorts ho iray amin'ireo Orinasa matanjaka indrindra eran-tany amin'ny taona 2019 ny Ivon-toerana Ethisphere. " Nanambara izy fa ny ampahany amin'ny loka dia mifototra amin'ny "fitondran-tena azo ekena" sy "miasa hiarovana ny zon'olombelona amin'ny alàlan'ny fanomezana fiofanana ho an'ny tompona hotely sy mpiantoka franchise hamantatra ny fanondranana olona."
fivarotan-tena is fanondranana olona an-tsokosoko. Tsy ara-dalàna ny any Illinois raha avelanao any amin'ny toeram-piasana misy ankizy matetika ny olona mampihetsi-po, mpivaro-tena, mpiloka, olona mamo, na mpamatsy vola. Tsy “fitondran-tena ekena azo ekena” ny fanitsakitsahana ny lalàna amerikana manana fahasembanana sy ny lalànan'ny zon'olombelona any Illinois. Raha avelan'Andriamatoa Ballotti ny Days Inn O'Hare hanavakavaka sy hamaly faty olona sembana, ary tsy miresaka momba ny fanondranana olona an-tsokosoko ao an-toerana, dia toa tokony hesorina tsy ho eo Wyndham ireo loka Ethisphere Institute, toy ny nesorina tamin'i Lance Armstrong ny fanomezam-boninahitra azy.
The Hotline nasionaly fanondranana olona an-tsokosoko 888-373-7888 dia misokatra 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro. Entanina ny vavolombelona hanao tatitra momba ny fivarotan-tena sy fanondranana olona an-tsokosoko amin'ireo mpisolo vava miady amin'ny ady an-tserasera. Ny vavolombelona koa dia afaka mandefa SMS amin'ny 233733 (tsy misy kaody kaody). Tamin'ny taon-dasa, orinasa 2,000 00564056 no ahiahiana no notaterina tao amin'ny Hotline, izay miara-miasa amin'ireo masoivohon'ny mpampihatra lalàna eo an-toerana sy federaly hiadiana amin'ny fanondranana olona. Addi, avy amin'ny The Hotline, dia nanamafy fa mitaky fitarainana momba ny fanondranana olona an-tsokosoko ao amin'ny Days Inn avy amin'i Wyndham O'Hare West izy ary nanonona ny laharana XNUMX.Nametraka ny politikan'ny fifindra-monina teritery ny fitondran'ny filoha Donald Trump, miaraka amin'ny fandroahana haingana ireo teratany vahiny. fanamorana ny fanondranana olona an-tsokosoko tsy ara-dalàna. Ny giggling "Oops, toa nilatsaka ny baolina tamin'ny fanatanterahana ny antenainao" tsy manapaka ny voantsinapy amin'ny ICE (Immigration and Customs Enforcement).
Izay rehetra manana fahalalana momba ny fanondranana olona an-tsokosoko na fanavakavahana olona sembana amin'ny trano Wyndham dia entanina hifandray amin'ny mpanoratra, Dr. Anton Anderssen (248) 266-5918. Hampitaina amin'ireo mpikambana 10,000 ao amin'ny ASTA ireo torohay, ary ho an'ireo mpisoratra anarana 8.8 tapitrisa ao amin'ity foibem-baovao ity.
Sarin'ny Days Inn avy amin'i Wyndham O'Hare West ao amin'ny Elk Grove Village dia nampakarin'ny mpikambana ao amin'ny Tripadvisor.com sy Jeff C tamin'ny alàlan'ny Yelp.
Dr. Anton Anderssen - manokana ho an'ny eTN
Antropolojika ara-dalàna aho. Ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana dia ao amin'ny lalàna, ary ny mari-pahaizana mari-pahaizana diploma dia amin'ny antropolojian'ny kolotsaina.
Efatra sy trano fandraisam-bahiny efatra amin'ny trano fandraisam-bahiny efatra no manakarama amin'ny taona 2021
American Airlines dia nanambara ny Direct Direct Miami ho ...
Ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana ao Jamaika dia nitombo 330.7%